China Rack System orinasa mpamokatra sy mpanamboatra | Zhenyuan
Ny rafitry ny vy dia rafitra an-habakabaka misy mpikambana marobe mifamatotra amin'ny teboka baolina amin'ny endrika takelaka sasany. Nanomboka nampahafantatra ny haitao vy sy ny vokatra avy any ivelany i Sina tamin'ny 1978, izay manana tombony amin'ny habaka anatiny lehibe, lanja maivana, fampisehoana seismika tsara
Ny firafitry ny vy dia rafitra spatial miforona amin'ny alàlan'ny fampifandraisana mpikambana marobe amin'ny alàlan'ny tonon-taolana arakaraka ny endrika takelaka iray. Nanomboka nanafatra ny haitao vy sy ny vokatra avy any ivelany i Sina tamin'ny taona 1978. Ny rafitry ny vy dia manana tombony amin'ny habaka anatiny lehibe, lanja maivana, fampisehoana seismika tsara ary fiarovana avo lenta.
Ny rafitra Grid dia karazana rafitra rafitra bara spatial, ary ireo mpikambana voasedra dia mifandray amin'ny alàlan'ny tonon-taolana mifanaraka amin'ny fitsipika sasany. Ny tonon-taolana dia natao ho toy nytonon-taolana mihantona, iharan'ny fanerena ny mpikambana matetika hery axial, ary ny haben'ny fizarana ampahan'ny mpikambana dia somary kely ihany. Ireo mpikambana izay mihaona eny amin'ny habakabaka ireo dia mifanohana, mampivondrona ireo mpikambana voadidy amin'nyrafitra mpanohana, araka izany, ara-toekarena ireo fitaovana ampiasaina. Noho ny fitambarana firafitra mahazatra, maro ny mpikambana sy ny node dia manana endrika sy habe mitovy aminy, izay mety amin'ny famokarana ozinina sy ny fametrahana tranokala.
Ny rafitra grid dia mazàna miorina amin'ny statically rafitra tsy voafaritra, izay mahazaka ny enta-mavesatra mifantoka, ny enta-mavesatra mavesatra ary ny asymmetric enta-mavesatra ary manana fampisehoana seismika tsara. Ny firafitry ny vatan-kazo dia afaka mifanaraka amin'ny takian'ny tranobe sy ny zavamaniry misy vanim-potoana samihafa sy ny toha-panohanana samy hafa, ary koa ny fiaramanidina isan-karazany sy ny fitambaran'izy ireo. Tamin'ny Mey 1981, nanambara nyFitsipika momba ny famolavolana sy ny fananganana rafitry ny grid (JGJ7-80). Tamin'ny volana septambra 1991, nohavaozin'i Shina izany ary nanaparitaka nyFitsipika momba ny famolavolana sy ny fananganana rafitry ny grid (JGJ7-91). Tamin'ny volana Jolay 2010, nanambara nyFitsipika ara-teknika momba ny firafitry ny habaka (JGJ7-2010) amin'ny alàlan'ny fampifangaroana ireo fepetra mifandraika amin'ny rafitry ny grid, akorandriaka naverina namboarina ary rafitra fantsom-bozaka stereo. Ho fanampin'izay, ho an'nybaolina voahidy tonon-taolana sy ny fittings ny rafitra grid, dia nanambara manokana i Shina Node bolongam-bolongana misy ny firafitry ny habakabaka (JG / T10-2009) ary kofehy mahery vaika ho an'ny firafitry ny rafitra ao anaty habakabaka (GB / T16939-2016), Ho an'ny fantsom-pifandraisana boribory amin'ny rafitra vy sy ny kojakojany, dia nanambara i Sina Welded Hollow Spherical Node an'ny Space Grid Structures (JG / T11-2009). Ny faritany sasany aza dia namoaka fenitra eo an-toerana amin'ny famokarana miaraka, toy ny fenitra any amin'ny faritanin'i JiangsuFamaritana ara-teknika ho an'ny lohan'andriana voan'ny bolongam-bolongana vy (Shell) (DB32 / 952-2006). Ireo fenitra mifandraika ireo dia famintinana ny zava-bitan'ny injenieran'ny firafitra farany sy ny fikarohana ara-tsiansa eto amintsika, ary mampiroborobo fatratra ny fampandrosoana ny rafitry ny grid eto amin'ny firenentsika.
Ny orinasa dia 25000m2 atrikasa famokarana tariby, fantsom-pohy, atrikasa famokarana mangatsiaka ary hatsiaka. Ny orinasa dia manana tsipika famokarana telo. Ny tsipika famokarana lehibe dia mifandraika indrindra amin'ny bolt ball bolt, tariby baolina lasoka, fantsom-boaloboka ary orinasa hafa, mahatsapa tsipika fivoriambe tonga lafatra avy amin'ny fanosotra plastika, fivoriambe, famafazana, fipoahana balafomanga, hosodoko mandeha ho azy, fanamainana gazy voajanahary, famonosana ary famoahana. Izy io dia afaka manome serivisy fijanonana tokana ny mpanjifa.
Teknolojia sy vokatra azo avy amin'ny rafitra: Amin'ny alàlan'ny fampiharana maharitra, amin'ny maha endrika firafitra fananganana matotra azy, ny firafitry ny vy dia be mpampiasa amin'ny tranobe indostrialy fananganana trano toy ny zavamaniry indostrialy lehibe, trano fanatobiana entana, trano heva lehibe, tranon'ny gara, toeram-pivarotana. , efitrano fampirantiana, gymnasium, foibe fampirantiana ary gara misy haingam-pandeha.
Scenario famokarana 1
Scenario famokarana 3
Scenario famokarana 2
Scenario famokarana 4
Ampahan'ny fampirantiana fitaovana an'ny orinasa
Fampidirana tranga ampahan'ny vokatra orinasa
Trano malalaky ny sekoly
Any Zhejiang, Sina no misy ny tetikasa
Trano famokarana mineraly
Any Shaanxi, Sina no misy ny tetikasa
Any shanxi, Sina no misy ny tetikasa
Trano fisakafoanana ekolojika
Any Guangzhou, Sina no misy ny tetikasa
Previous: Famokarana sy famoronana orinasa fampidirana
Manaraka: Sehatra famokarana ampahany amin'ny orinasa
Famolavolana paompy ao amin'ny Staad Pro
Famolavolana paompy vy
Famolavolana paompy firafitra